I-Neoprene Patella Knee Support Brace ye-Tendonitis China Manufacturer
Incazelo:Patella Knee Brace,Patellar Tendonitis Brace,Patella Knee Support
 HomeImikhiqizoStrap SupportUkuxhaswa KneeI-Neoprene Patella Knee Support Brace ye-Tendonitis
I-Model No.: HXW-K29
【I-Absorb Shocks futhi Yedlulise Ubuhlungu pad Iphayiphu yokuvumelanisa ekhuthazayo ebondeni elihlwabusayo ibamba ipotellar ezungeze edolweni futhi ibambe ukushaqeka. Yehlisa izinhlungu ezihambisana ne-patellar tendonitis, idolo le-jumper, idolo lomgijimi, i-chondromalacia.
【I-Extra Wide Brace futhi Hlala Njalo Endaweni kn I-kng knic kneli yesikhumba se-Ergonomic ifaka i-kneecap yakho ngokuqinile ukuvumela ukwakhiwa komsipha. Izinto ezisetshenziswayo zeprimiyamu ziqinisekisa ukuthi ukucindezela kufana yonke futhi kuhlala endaweni yanoma yimuphi umsebenzi womzimba.
Mat Indwangu Ethokomele & Engasindi】 Imiphetho ebushelelezi ayicasuli isikhumba futhi igoqa ngokuqinile ezungeze idolo lakho ukusebenzisa ukwesekwa. Akubonakali ngisho. Ungaguqa futhi usebenze kangcono ngalo ukuze unikeze idolo lakho laphumula ngokwanele ekucindezelekeni.
【I-One size Fits All & Reinforced Stitching has Inenqwaba yesilayidi ukuze qinise noma ukhulule. Ifanela noma yiziphi izidingo ezithile ezisuka enganeni ziye kumuntu omdala zokuphumula i-tendon. Inika ukuvikelwa kwedolo lochwepheshe ukuvikela ukulimala okukhulu ngengozi.
Resp Ukuzibophezela Okuphezulu Ngemuva Kwemisebenzi Yokuthengisa】 I-HXW igcizelela kakhulu ikhwalithi ephezulu nomsebenzi wekhasimende. Noma yiluphi udaba, sicela uxhumane nathi nge-imeyili. Inkonzo yethu yamakhasimende esebenza kahle izosinikeza isisombululo esanelisekile.
UMcdavid Knee Patella Brace Nge-Osteoarthritis Xhumana Nanje
Patella Knee Brace Patellar Tendonitis Brace Patella Knee Support Patella Knee Strap Patella Tendon Brace Patella Ukulandelela Brace Ace Knee Brace I-Basketball Knee Brace